Ikhabhathi epholileyo yelog 35m2 kufutshane neVienna!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSimon
Malunga ne-995 m2, le khabhathi yelog inomtsalane imalunga ne-35m2 enebhoyila yerhasi / iWC / ishawari kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elineoveni kunye nefriji. Izitya, izitya, iipani, unomathotholo, umenzi wekofu, iitawuli, abantu aba-2 phantsi, aba-4 ukuya phezulu. I-TV encinci kunye ne-Xbox360 kunye ne-eriyali ye-SAT ngoku ivumela ukufikelela kumxholo onjenge-Amazon Prime, Netflix, Youtube, Twitch, Skygo, RedBullTV, NBA, NFL, OneDrive. Kukho isitya esincinci sewayini esihlaziyiweyo esinewayini ezisi-7 ezahlukeneyo ezisuka eGernot Reisenthaler ukukhetha.
Unokufikelela kwigadi epheleleyo malunga ne-1000 m2 kunye nekhabhinethi yelog incl. kwigumbi eliphezulu. Kukho i-tripod yokugcoba , iibhentshi zebhiya , iinkuni ezaneleyo , iindawo zokuhlala zelanga , iparasol , izitulo ezisongwayo ezininzi nokunye. Zonke iifestile zinenethi zeengcongconi. Uya kufumana amathuba amaninzi okuhlala kunye nokunyuka. Umntu unokuhamba ngokuhlwa ajike ezantsi endlwini yomthi, okanye onwabele iglasi yewayini endulini okanye ahambe ethafeni ngokuhlwa ngokukhululekileyo, ulindelwe ziingozi ezingenakubalwa. Ikhabhinethi imi malunga ne-3.2 km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-"Tullnerfeld". Ukusuka apho uya kufumana kwi-15 min ukuya kwisixeko esikhulu saseVienna.
4.84 · Izimvo eziyi-241
Iyaziwa ngokuba yi-Zöfing kwi-nursery Kramer kunye ne-Kramer, izitali kunye neentsapho ze-Auberghof Heurigen Heigl kunye ne-Reisenthaler. Amaxesha okuvulwa kweethaveni zewayini afumaneka kwiphepha lasekhaya laseJudenau.
UMesse Tulln uyafikeleleka ngebhasi
IMyuziyam yaseSchiele iTulln
Umgama wokuhamba ehlathini
Indawo yokuthengisa iwayini kumgama wokuhamba (ukuba ivuliwe)
Iindwendwe zityelela eJudenau okanye eBaumgarten
Amachibi angaphandle aneklorine atyelele eKönigstetten okanye eSieghartskirchen okanye eTulln Danube Splash
Umgama wokuhamba ngomzuzu o-1 useyindawo yokudlala, ibala lebhola ekhatywayo kunye nebala lebhola yevoli
Gasthof Reif eJudenau
Ndihlala ecaleni kwayo. Igadi yomngxuma ibiyelwe kwaye inezityalo ezininzi ezijikelezileyo ukuze ube nemfihlo yakho. Ungabhukisha kwakhona ingokuhlwa yokungcamla iwayini kwi-Heurigen Reisenthaler (umzuzu om-1 ukuhamba) ngee-euro ezingama-40 ngomntu ngamnye. Kukho iiwayini ezininzi zesampulu kunye nesonka esenziwe ekhaya, ibhekoni kunye neesoseji zinokungcamla. Ngokuqinisekileyo ungathenga iimveliso emva koko. Ukuba ungathanda ukwenza idinga, nceda uqhagamshelane nam kungekudala ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho. Ungangcamla iiwayini ngokuthe ngqo kwindawo evalelwe kuyo iwayini okanye urhoxe kwi-stube eshushu.
Ndihlala ecaleni kwayo. Igadi yomngxuma ibiyelwe kwaye inezityalo ezininzi ezijikelezileyo ukuze ube nemfihlo yakho. Ungabhukisha kwakhona ingokuhlwa yokungcamla iwayini kwi-Heurig…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zöfing